Mandalay Gazette မှ စာရေးသူ၊ စာဖတ်သူများသို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » Mandalay Gazette မှ စာရေးသူ၊ စာဖတ်သူများသို့
Mandalay Gazette မှ စာရေးသူ၊ စာဖတ်သူများသို့
Posted by စဆရ ႀကီး on May 27, 2011 in Contributor, Columnist, Myanmar Gazette | 17 comments
တွေ့ဆုံပွဲလေးဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ရက်အတိအကျသတ်မှတ်ခိုင်းသော်လည်း အားရကျေနပ်စရာ အဖြေတစ်ခုကိုမရပါ.. အပျော်သဘောအနေနှင့်သာ ဝိုင်းဝန်းရေးသားကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကိစ္စမရှိပါ။ ကျွန်တော်သည် လွယ်လွယ်နှင့်လက်လျှော့တတ်သော လူစားမဟုတ်ပါ။
တစ်ချို့များ ဘာမဆိုင်၊ ညာမဆိုင် ဟိုလူတွေကို ကြောက်နေကြသည်။ ဟိုလူများကို ကြောက်ရန်မရှိပါ။ ကျွန်တော့်အမြင်သက်သက်ဖြင့်ပြောရမည်ဆိုလျင် နိုင်ငံတော် ပုန်ကန်မှုဟု စွဲချက်တင် မခံရနိုင်သည့်အချိန်ထိ နိုင်ငံတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်း၊ ပြည်သူပြည်သားများ အကျိုးများရာ၊ များကြောင်းကို မည်သူ့ကိုမျှ ပုတ်ခတ်ခြင်းမရှိဘဲ အပြုသဘောဆောင်ရေးသားနေသမျှ နိုင်ငံရေးပုဒ်မဖြင့် ငြိမည်မထင်ပါ။ စာရေးသူ၊ စာဖတ်သူသက်သက်သာ တွေ့ဆုံလိုရင်း ဖြစ်ပါ၏။ ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်များပါ တွေ့ဆုံရလျှင် မည်မျှကောင်းလိမ့်မည်နည်း။
ကျွန်တော်တို့တွေ မွေးဖွားလာကြကတည်းက သွေးသားခွဲခြားမှုတွေအရ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ သျှမ်း ဟု ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရသော်လည်း မြန်မာပြည် ကို်လိုနီလက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့ကြသည်မှာ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ်ကြောင့်ပင် မဟုတ်ပါလား။ တစ်ချိူ့သောလူမျိုးများ (အထူးသဖြင့် ချင်း)ဆိုလျင် မျိုးကွဲပေါင်း ၅ဝ ကျော်ခန့်ရှိသည်ဟု သိရသည်။ ယခုအချိန်တွင် မြန်မာပြည်သည် တိုင်းတစ်ပါးသား အုပ်ချုပ်မှုမဟုတ်သော၊ မိမိလူမျိုးအချင်းချင်း အုပ်ချုပ်မှုအောက်သို့ ရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်ပါသည်။ ချို့ယွင်းချက်များရှိပါသည်။ အဆီအငေါ်မတည့်သည်များ ရှိပါသည်။ ဗမာလူမျိုးများ အချင်းချင်းနှစ်သိမ့်နေကျ စကားကိုယူသုံးရလျင် တရားကို နတ်စောင့်ပါသည်။ ရှိတ်စပီးယား၏ ခရစ်ယာန်အယူတစ်ခုကို ယူသုံးရလျင် GOD see the truth, but….. wait ဟုပဲပြောရပါမည်။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုသာ စောင့်ကြပါတော့။ အရာရာတိုင်းတွင် ပြောင်းလဲရန် တစ်စက္ကန့်သာ ကြာပါသည်။ ပြောင်းလဲချိန်တန်လျင် သူ့အလိုလိုပြောင်းလဲသွားပါမည်။
လိုရင်းကို ဆက်ပါမည်။ Moon Bakery ဆိုင်ခွဲရှိရာတစ်နေရာရာတွင် တွေ့ဆုံစေလိုပါသည်။ အလျင်းသင့်လို့ ပြောရမည်ဆိုလျင်တော့ဖြင့် ထိုဆိုင်၏ မူရင်းပိုင်ရှင်မှာ Ms. Julia ခေါ် ကိုရီးယားမတစ်ယောက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာပြည်ရောက်ရှိပြီး British Council တွင် English စကားပြောတက်ရင်း မြန်မာပြည်ဖွား ပြည်မကြီးသားဖြင့် အကြောင်းပါပြီး လင်မှာလည်း အလုပ်များသည်ကတစ်ကြောင်း၊ မယားဖြစ်သူ ကိုရီးယားမမှာလည်း ရွှေပြည်သာရှိ အထည်ချုပ်စက်ရုံ (Crocodile) ကို စီမံကွပ်ကဲနေရသည်မှာ မအားလပ်သည်က တစ်ကြောင်းကြောင့် တစ်ခါတည်း အပြီးမွေးမြူထားလိုက်သည်မှာ တစ်ကြိမ်တည်းနှင့် သုံးသားကျသောဟူ၏။ သမီးမိန်းကလေးများသာ ဖြစ်ကုန်သောကြောင့် ယောက္ခမဖြစ်သူ ပြည်မကြီးသူမှာ မကြည်ဖြူသော်လည်း မိမိ၏သားမှာ လက်ထပ်ပြီးဖြစ်သောကြောင့် ထို သမီးသုံးယောက်ကိုသာ ပြုစု စောင့်ရှောက်ထားရလေ၏။ ရ မိုင်ခွဲရှိ အတွင်းကျကျ၊ တန်ဖိုးမြင့်မြင့် အိမ်တစ်လုံးတွင် အတူတစ်ကွ နေထိုင်လျက်သာ ရှိလေ၏။ ယောက္ခမနှင့် ချွေးမမှာ ကြွက်ရုပ်ကို ကိုယ်စားပြုထားသည့် သူကြီးနှင့် ဖဲ့ဖေါ် ဖဲ့ဖက် ကြောင်ရုပ်ကို ကိုယ်စားပြုထားသည့် ကို ကြောင်ကြီးအလား နေ့စဉ် တစ်ကျက်ကျက်နှင့်သာဖြစ်လေ၏။ ထိုမှတစ်ဆင့် Moon Bakery ဆိုင်များကို စိတ်ကူးကောင်းကောင်းဖြင့် တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာခြင်း ဖြစ်လေသည်။ (အလျင်းသင့်သဖြင့် ဗဟုသုတအလို့ငှာ ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါသည်)
မူရင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သောသူနှင့် ကျွန်တော်မှာ တစ်ချိန်က သိကျွမ်းခဲ့ဖူးသော အသိမိတ်ဆွေများဖြစ်သည်ကတစ်ကြောင်း၊ ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူမှာလည်း အနုပညာသမားများကို လေးစားရင်းရှိသည်က တစ်ကြောင်းကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံပွဲလေးကို ဖြစ်မြောက်အောင် ကျွန်တော့်တာဝန်သာထားကြရန်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးအပိုင်းကိုတော့ တတ်နိုင်သူများမှ ၁ဝ သိန်းတန်၊ သိန်း ၁၀ဝ တန် အစရှိသဖြင့် မတည် လှူဒါန်းကြမည်ဆိုလျင်ဖြင့် တွေ့ဆုံပွဲလေး အထမြောက် အောင်မြင်နိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
သူကြီးမှ ရက်ရက်ရောရောလှူဒါန်းထားသော ရေခဲရေဖိုးများလဲ ရရှိပြီဖြစ်ပါသောကြောင့် ရက်စွဲအတိအကျနှင့် Moon Bakery ဆိုင်ခွဲတစ်နေရာတို့သာ အကြံပြုရန် လိုတော့ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပြောရင်တော့ အလှူငွေ ထည့်မယ်ဗျာ၊ ကိုယ့်အိတ်ကပ်ထဲကို…..
မနောက်ဘူးဗျာ လာခဲ.မယ် sunday ဆိုရင်ပေါ.
ကျနော်တို.က တစ်ရက်လုပ်မှ တစ်နှစ်စားရတာ
တကယ်ဆုံဖြစ်ကြမှာ မို့လို့လား ။
ဆုံကြပါမယ်.. ဆုံချင်လွန်းလို့.. ဆုံဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုမှ
ဆုံမှာလား၊ မဆုံဘူးလား၊ ဆုံကြမှာလားပဲ ပေးနေတာပဲ
ဆုံမယ်ဆိုရင် အကုန်ဖျက်ခဲ့ရမှာ (သနပ်ခါး … အဲ ဟုတ်ပါဘူး) အလုပ်ကိစ္စတွေ
တစ်ကယ်လာချင်ပါတယ် ဘာမှမကြောက်တတ်ပါဘူး ဝေးနေတာဆိုးတယ်
အင်းလျားကန်စောင်းက moon မှာဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ကိုရှုံး
အခုဆုံကြမှာ အင်းလျားကန်စောင်းက moon မှာလား တော်0င်စင်တာက Morning star မှာလား အချိန်ကရော နေ့ရက်ကရော တကယ်ရောဆုံကြမှာပါလား …..
Moonpoem ပြောတဲ့ တော်ဝင်မှာပဲဆုံကြတာပေါ့ ဒါဆိုလဲ.. သူပြောတာ ပိုပြည့်စုံပါတယ်
ကောင်းပါပြီဗျို. ဇွန်လ ၅ရက်နေ.ရဲ. နေ.လည်၁၁ နာရီမှာ အားလုံးပဲတွေ.ကြမယ်လို.အတည်ပြုပြီဗျာ
လက်မထောင်လို့ မရတဲ့ မန်ဘာတွေ အမြီးထောင်လိမ့်မယ် .. ဥပမာ … ကိုကြောင်ကြီးတို့… ကိုငှက်ကြီးတို့ …
ကဲ အားလုံး အိမ်လာ ကြ ။ ဘာ စရိတ်မှ မကုန်ဘူး။ ကြက်သား ကာလသားဟင်း ချက်ကျွေးမယ်။
လိပ်စာရယ်… အချိန်ရယ်၊ နေ့ရက် ရယ် အတိအကျသာ ရေးလိုက်ဗျာ… လာခဲ့ပါ့မယ်…. ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ နောက်မှ ယူပေါ့ဗျာ…
ဒါလည်း ကောင်းသားပဲ လူစုပြီး တကားလုံး စင်းလုံးငှား လစ်ကြမယ်လေ … ။
ခုတော့လည်း စပြောတဲ့သူက လာတဲ့သူတောင် သွားမတွေ့ဖူးဆိုတော့ တစ်မျိုးပဲနော်။ ကိုယ်ပြောပြီး ကိုယ်ကအရင် ဒီလိုလုပ်တာတော့မကောင်းဘူး။